Ny sarety 6 tsara indrindra ho an'ny alika | Tontolo alika
Ny sarety alika dia manampy betsaka hanamora ny fiainana rehefa mamindra ny alikantsikaindrindra raha tanora tokoa izy ireo na tena antitra. Tena mahazo aina izy ireo satria, amin'ny fananana kodiarana, azontsika atao ny mamily azy ireo amin'ny arabe nefa tsy mamela ny lamosintsika na ny sandrintsika, ho fanampin'izany, mamela ny alika hahatsapa ho voaro sy milamina.
Ka anio hiresaka momba ny sarety alika izahay. Nanomana safidy tsara momba ny vokatra tsara indrindra izay ho hitanao amin'ny Amazon izahay ary hanome toro-hevitra vitsivitsy ihany koa ho tadidinao rehefa mividy ny iray amin'ireo vokatra ireo. Na dia, raha mila vahaolana kilasika kokoa ianao dia amporisihinay ihany koa ny lahatsoratray ny mpitatitra tsara indrindra ho an'ny alika lehibe.
PawHut mametaka stroller ...
Pawhut Stroller ho an'ny ...
Bisikileta Pawhut Trailer ...
Fonon-dranon'orana Zambu ...
1 Ny fiara tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Stroller mivalona maivana
1.2 Fampirimana alika miaraka amina kodiarana bisikileta
1.3 Trolley ho an'ny alika tsy manan-kery na kilemaina
1.4 Sarety alika lehibe
1.5 Sarety kodiarana 4 ho an'ny alika
1.6 Sarety alika mora vidy
2 Fomba hisafidianana ny fiara tsara indrindra ho an'ny alikanao
2.2 Tany sy toetrandro
2.3 Ny toetran'ny alikanao
3 Ahoana ny fametrahana ny alikanao ao anaty fiara
4 Aiza no hividianana sarety alika
Ny fiara tsara indrindra ho an'ny alika
Stroller mivalona maivana
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho hitanao eny an-tsena dia ity stroller misy kodiarana telo miforitra ity. Aforeto dia zara raha mandray toerana ary 5 kilao ihany. Izy io dia miaraka amina kojakoja marobe sy endrika tena ilaina. Ohatra, rakotra harato moka izy io, mba hahazo aina sy hatsiaka ny alikanao. Izy io koa dia mampiditra amoron-tsiraka roa azonao ampiasaina amin'izany na hitahiry ny kilalaonao, loka ... Zavatra azonao ampirimina anaty vatasarihana ambany azo ampiasaina koa, mety indrindra ho an'ireo kojakoja matevina indrindra. Farany, mihodina 360 degre ny kodiarana ary mandroso tsara amin'ny karazana pavement rehetra.
Ho fanoherana, ny sarety dia natao ho an'ny alika kely, satria dimy ambin'ny folo kilao fotsiny ny fananany.
Fampirimana alika miaraka amina kodiarana bisikileta
Raha ianao sy ny biby fiompinao dia iray amin'ireo mihetsika, Ity tranofiara ity hametahana amin'ny bisikileta dia tena tsara. Vita amin'ny fitaovana avo lenta izy io, matanjaka saingy mailaka miaraka amin'izay (na dia nitaraina momba ny fotony tsy marin-toerana aza ny mpampiasa iray, satria tsy misy takelaka vy), mitondra saina izy ary natao ihany koa mba hahafahan'ny alikao afaka mahazo aina tsara, satria ilay tranofiara dia manana harato moka azo esorina na amin'ny sisiny na eo an-tampony. Afaka misafidy habe telo (S, M ary L) ianao. Ny kodiarana dia karazana bisikileta, noho izany dia mivezivezy tsara amin'ny karazana tany rehetra izy. Ny fantsakana dia vita amin'ny fantsona izay miraikitra amin'ny chassis amin'ny tapany aoriana amin'ny bisikileta.
Trolley ho an'ny alika tsy manan-kery na kilemaina
Seza misy kodiarana Teabelle ...
Ireo kodiarana ireo dia hanamora ny fiainana ny alikao raha tsy afaka mihetsika ny tongony lamosina. Izy io dia misy kodiarana roa ary rafitra misy tadiny sy kofehy hanohanana ny tongony aoriana mba hahafahan'ny alika mihetsika indray. Manana habe marobe izy ary asongadin'ireo mpampiasa fa, noho ireo tadiny, dia azo ovaina izy io, ka mifanaraka tsara amin'ny alikanao. Ho fanampin'izany, maivana ihany koa izy io, izay mety amin'ny famelana ny alika hiverina hamindra sy haingam-pandeha, na dia somary tsy milamina aza izy io amin'ny toerana midina be.
Sarety alika lehibe
IREENUO Strollers ho an'ny ...
Etsy ankilany, raha iray amin'ireo manana alika lehibe manana olana amin'ny fivezivezena ianao na te-hitsangatsangana fotsiny amin'ny fampiononana, eo amin'ireo sarety alika asehontsika anio dia liana ianao ity maodely tena lehibe misy kodiarana efatra ity. Ho fanampin'izany, manana endrika hafa tena mahaliana izy, toy ny harato moka mahazatra sy ny varavarankely mba ahazoana aina ny alikanao, kodiarana any aoriana misy frein, tantana azo ovaina ary koa paosy any aoriana izay ahafahanao mitahiry zavatra maro. Ny kilao farany ambony dia 60 kilao.
Sarety kodiarana 4 ho an'ny alika
Ary ho an'ireo izay maniry sarety kodiarana 4 ho an'ny alika, dia manana safidy mahaliana ihany koa izy ireo, toy ity maodely lamba ity miaraka amin'ny haratony moka mahazatra. mitondra ny alikantsika amin'ny fiononana feno. Misokatra amin'ny toerana roa izy io hahafahanao mametraka ny alikao sy hivoaka amin'izay mety aminao indrindra. Ankoatr'izay, ny kodiarana any aoriana dia manana freins, mba hahafahanao miaro ny sarety rehefa mijanona ianao.
Ahitana fiasa mahaliana hafa ny maodely, ohatra, coaster ary bara fitoviana hamindra azy. Natao ho an'ny alika kely izy io, ary 15 kilao ny fahaizan'ny entana. Farany, azo atao ny mamoritra azy mba hitahirizana tsaratsara kokoa.
Sarety alika mora vidy
display4top Trolley an'ny 4 ...
Ary farany, atolotray anao ny maodelin'ny sarety alika tsy ny kalitao ihany, fa ny mora indrindra koa, satria kely dia kely ny vidin'ny € 50. Ny maodely dia misy kodiarana efatra, mpihazona kaopy, vatasarihana ambany ary varavarankely misy harato moka, toy ny efa mahazatra. Na dia tena tsara aza izany, ao amin'ny fanehoan-kevitra, misy ny mpampiasa milaza fa vita amin'ny plastika ny kodiarana fa tsy fingotra, izay mampiseho akanjo sasany rehefa mandeha ny fotoana.
Fomba hisafidianana ny fiara tsara indrindra ho an'ny alikanao
Rehefa mividy sarety alika dia ilaina ny manana andian-dahatsoratra lafin-javatra ao anaty kaonty rehefa misafidy modely iray na iray hafa. Ohatra:
Ny fampiasana izay homenao ny fiara dia iray amin'ireo zavatra voalohany tsy maintsy dinihinao alohan'ny hanaovana ny fividianana. Raha mikasa ianao, ohatra, ento an-tongotra dia afaka mividy sarety ianao ataovy toy ny zaza iny. Etsy ankilany, raha te hitondra azy mifatotra amin'ny bisikileta ianao dia afaka misafidy ireo maodely ireo miaraka amina sakana manokana. Ny mifanohitra amin'izay, raha ny tianao dia ny maka ny biby fiompinao satria tsy afaka mandeha tsara izy dia azo inoana fa hahita maodely mametraka fiononana ambonin'ny ambiny ianao.
Ilaina ihany koa diniho sao ho lava na ho fohy ny dia. Ilaina indrindra izany rehefa manapa-kevitra raha mila sarety misy toerana fanampiny ianao hatrizay, na dia misy am-paosy na drawer fanampiny aza ny ankamaroany, raha tianao mandritra ny dia lavitra dia mety somary tery izany.
Tany sy toetrandro
Ho fanampin'ny fampiasana, ny tany sy ny toetrandro dia singa roa hafa tokony hikajiana rehefa mividy sarety. Raha hampiasa azy io amin'ny faritra asfalta ianao, na amin'ny farany dia hoentinao any amin'ny valan-javaboary, mety ho ampy ny maodely tsotra iray. Etsy ankilany, raha mitsidika toerana somary ambanivohitra sy mikitoantoana ianao na hampiasainao amin-kery kokoa dia safidio modely iray izay manana kodiarana fingotra tsara, satria miharatsy haingana ireo plastika.
Toy izany koa, raha mafana be ny andro dia mifidiana fiara misy lamba miaina ary harato moka ka afaka mikoriana ny rivotra ary milamina ny biby fiompinao. Etsy ankilany, raha avy matetika ny orana dia tsara kokoa ny misafidy iray amin'ny lamba tsy tantera-drano.
Ny toetran'ny alikanao
Ary farany, ny toetran'ny alikanao dia zavatra iray hafa tena ilaina amin'ny fisafidianana modely fiara ho an'ny alika na hafa. A) Eny, Ilaina ny fandrefesanao ny biby fiompinao mba hisafidianana fiara mifanaraka amin'ny habeny (Amin'ity tranga ity dia tsara kokoa foana noho izay tsy ampy izy mba ahazoana aina tsara ny biby).
Amin'ny lafiny iray, ny toetran'ny alikanao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fividianana koa. Ohatra, raha tena be atao ny alika dia tsara kokoa ny misafidy famolavolana izay matanjaka indrindra mba haharitra kokoa ary vitsy ny vintana handosirana azy.
Ahoana ny fametrahana ny alikanao ao anaty fiara
Ny zavatra voalohany tsy maintsy tadidinao rehefa mahazo ny fiara vaovao dia izany aza manery hanery ny alikanao hiditra, satria mety hatahotra izy ary tsy te hiakatra intsony. Mifanohitra amin'izany, avelao amin'ny toerana hita maso sy azo alefa ny fiara, mba hahafahan'ny alika hanazatra azy, hamofona ary hanomboka hanao azy ho azy. Azonao atao ny miala eo akaikiny ary ambonin'ity loka ity, akanjo miaraka amin'ny hananao ... ka ho hitany fa tsy fandrahonana izy ary ho very ny tahotra.
Raha vantany vao mijanona tsy mampatahotra azy ny fisian'ny fiara dia azonao atao ny manomboka mametraka azy ao anatiny. Manomeza valisoa hanamafisana ny fahatsapana tsara. Raha vantany vao zatra io dia fotoana tokony hanaovana ny dingana manaraka: ento mankany amin'ny zaridaina na lavarangana.
Avereno im-betsaka araka izay ilaina ny fiofanana. Raha hitanao fa miady saina ilay mahantra dia mijanona ary manomboka indray avy eo. Raha vantany vao zatra azy tanteraka io dia azonao atao ny mamoaka azy eny amin'ny arabe, na dia atoro anao aza ny hanombohanao amin'ny diany fohy ary hanitatra azy ireo rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny fanamafisana tsara hatrany ireo loka, mba hahavitana azy.
Aiza no hividianana sarety alika
Ny marina dia hoe mbola tsy dia misy toerana ahafahanao mividy sarety alika, satria famoronana vaovao tokoa izy ireo. Raha ny marina dia roa ihany (na dia afaka mahita modely an-tanana amin'ny Wallapop na Ebay ohatra aza ianao):
Amazon Io no manana maodely marobe kalesy alika. Ny ankamaroany dia manana vidiny mirary ary mety ho fanampin'izany, raha nifanaraka tamin'ny safidiny voalohany ianao dia entin'izy ireo any an-tranonao tsy andoavam-bola fanampiny.
Amin'ny lafiny iray, amin'ny fivarotana biby fiompy manokanaNa amin'ny Internet na amin'ny ara-batana dia hahita fiara maro samihafa ianao. Ny zavatra tsara momba ireto magazay ireto dia ny ahafahanao mandeha sy mahita an-toerana ny vokatra tianao ho entina miaraka aminao, zavatra tena ilaina, ohatra, hijerena ny kalitao, ny fitaovana, ary indrindra ny habeny.
Ny sarety alika dia famoronana maoderina tokoa, nefa miaraka amin'izay dia tena ilaina ary manatsara ny fiainan'ny alika satria, ohatra, mamela anao hitety azy ireo amin'ny dia lavitra izy ireo. Lazao aminay, manana fiara toa izany ve ianao? Inona ny hevitrao? Ampirisihininao aminay ve izany? Aza adino fa afaka milaza aminay na inona na inona amin'ny hevitra ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny sarety 6 tsara indrindra ho an'ny alika